Yintoni edibanisa? Ukwenza iNkampani kunye ne-LLC ichaziwe
Ukudibanisa sisenzo sokwenza ubume beshishini "elitsha" elinika ishishini elithile, irhafu, kunye nezibonelelo zomthetho kubanini bazo. Ngokomthetho wokubandakanya, iqumrhu elisemthethweni elahlukileyo elinokuthi libe ngumnini wepropathi, lihlawule irhafu, lisayine izivumelwano ezibophelelayo, kwaye likhusele abanini balo kwityala leshishini nakwimali. Zininzi iimodeli zezinto ezahlukeneyo ezinokuthi zikhethwe ngumnini-shishini, kuxhomekeke ekubeni zeziphi izibonelelo ezisemthethweni nezerhafu ezisebenza ngokukuko kwimidla yenkampani yakhe.
Ubambiswano lweTyala eliDibeneyo
Limited Imfanelo Inkampani
Ngolwazi olongezelelekileyo kumacandelo oshishino angadibaniswanga kwaye adityanisiweyo sinikezele ngolwazi oluneenkcukacha kumashishini athandwayo kwishishini lethu Iindidi zoShishino icandelo.
I-Sole Proprietorship ichaza ulwakhiwo olulula lweshishini lomntu ngamnye. Amashishini amaninzi amancinci asebenza njengeSole Proprietorship (umzekelo, ivenkile yakho "kamama kunye nepop", ivenkile yezihlangu, njl. Njl.); Nangona kunjalo, enye yezona ngxaki zinkulu kwesi sakhiwo kukuba umnini uxanduva lobuqu kuwo onke amatyala asemthethweni nawezimali. Ityala elinxulumene neshishini okanye uphicotho lwerhafu lwe-IRS lubeka abanini bempahla kubungozi bokuhluthwa. Ngapha koko, yonke ingeniso yeshishini irhafiswa njengemali oyifumene ngumnini. Nangona ishishini linokukhetha ukusebenzisa igama lorhwebo (okanye i "DBA," njl. Njl. - naliphi na igama lorhwebo kufuneka libhaliswe kunobhala wedolophu / wedolophu elimi kuyo ishishini), akukho kungabikho ukwahlulwa ngokusemthethweni umnini-shishini njengoko kunokwenzeka nakwezinye iintlobo zezakhiwo zeshishini.
Izinto eziluncedo zeSole Proprietor
Izithintelo ezincinci zoMthetho
Ingeniso exelwe kwirhafu yomnini
Iingxaki zeSole Proprietor
Uxanduva lomntu olungenamda kumatyala kunye noTyala kwiShishini
Umnini unokuphulukana neeasethi zakhe kwishishini lokumangalela
Ishishini liyaphela xa kusweleke uMnini
Amandla aKeleyo okuPhakamisa iNkxaso mali
Ubambiswano ngokubanzi luvumela amaqela amabini nangaphezulu ukuba babelane ngoxanduva kunye nenzuzo yenkampani. La maqela anokuthotyelwa kwimibutho yabucala, abantu, ubuhlakani, itrasti, okanye nayiphi na indibaniselwano yoko.
Izinto eziluncedo ngokuBambisana ngokuBanzi
Amandla oLawulo lwezeMali nawolawulo awo onke amaQabane anokuSetyenziswa
Izinto ezingalunganga ngokubambisana ngokubanzi
Amaqabane abonakalisiwe kuxanduva olungenamda kumatyala asemthethweni nakwimali eshishini
Uxanduva olubangelwe okanye olwenziwe liqabane elinye lishiya onke amaqabane esengozini yokuhluthwa kweshishini kunye nezinto zobuqu
Ishishini liyayeka ukubakho kwimeko yokusweleka kweQabane (kwimeko apho ucwangciso lokuqhubeka kweshishini lungekho)
Amaqabane ayakwazi ukwenza ishishini kwizibophelelo ngaphandle kwemvume kwamanye amaqabane
Ubambiswano lweshishini (LP) lwakhiwo lweshishini lwenza into eyahlukileyo yomthetho ebandakanya iqabane elinye okanye ngaphezulu ngokubanzi kunye neqabane elinye okanye elinganiselweyo. La maqabane anqunyelweyo atyala imali ngenkuthalo kwishishini kwaye anqunyelwe kumatyala abo ngokulingana nemali eyinkunzi abayityalayo. Iqabane ngokubanzi lilawula ukusebenza kobambiswano kwaye linoxanduva lobuqu kuzibophelelo kunye namatyala. Umbutho uhlala ubekwa kwindawo yeqabane ngokubanzi ukuze ufumane uxanduva. Uninzi lwevoti yamaqabane okuvota, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela ngesivumelwano esibhaliweyo, inokutshintsha ukuba ngubani osebenza njengeqabane ngokubanzi.
Xa iqabane eliqingqiweyo limangalelwa ngokobuqu kwaye kukhutshwa isigwebo, loo mlingane unqunyelweyo kwiQabane lobuDlelwane eliQinisekileyo ukhuselwe ekuthinjweni njengoko kunjalo nakwezinye iiasethi ezigcinwe buDlelwane obuMiselweyo. Ngenxa yolu khuselo, ubuDlelwane obuMiselweyo buhlala busetyenziswa ngokufanelekileyo ukukhusela iiasethi kubabolekisi.
Izinto eziluncedo kubuhlulelwano obulinganiselweyo
Iiasethi ezingaphakathi kubambiswano olunqunyelwe zinokukhuselwa ekubanjweni xa iqabane elinomda liphulukana nomthetho.
Inzuzo eyenziwe buDlelwane boMda inikwe ingxelo ngokulula kwimbuyekezo yamaqabane
Amaqabane ancitshisiweyo akhuselekile kwityala kwityala lokushishina
Ngesivumelwano sobambiswano esiyiliweyo, akukho cap kwixabiso lemali elinokuthi iqabane ngokubanzi liqokelele kwishishini.
Ubuhlakani obulinganiselweyo bunokuba yeyakho ipropathi, ukumangalela, kwaye bamangalelwe ngenxa yenqanaba labo njengeziko elisemthethweni elahlukileyo
Ubambiswano olunomda lufuna amaxwebhu asemthethweni ngakumbi kunobuDlelane Jikelele
Uxanduva lwamaQabane Jikelele, ngenxa yoko lifuna elinye iqumrhu, njengequmrhu, ukuba lisebenze kwesi sikhundla
Ubambiswano lweTyala eliLingeneyo (i-LLP) elihlala lisebenza kwimisebenzi yobungcali efana nomthetho, ubalo-mali kunye nolwakhiwo. Olu hlobo lwecandelo lezomthetho elahlukileyo livumela ukukhuselwa koxanduva kuwo onke amaqabane ngokubanzi, kunye namalungelo olawulo. Kwiimeko ezininzi ubuDlelwane boThintelo lweTyala eliNcitshisiweyo libonelela ngoxanduva olufanayo olulinganiselweyo olufumaneka kwiQumrhu. Ngeenjongo zerhafu, ubuDlelwane boThintelo lweTyala eliNcitshisiweyo kukuhamba okukhoyo njengeNtsebenziswano.
Ubambiswano lweTyala eliNqabileyo libonelela ngesakhelo sezomthetho ekuqaleni kweshishini
Amaqabane ancitshisiweyo akhuselekile kwityala lenkampani kuba uxanduva lwabo luxhomekeke kwinani lemali abayityalileyo
Izabelo ezihlawulwe kumaqabane zixeliwe kwimbuyekezo yeerhafu zamaqabane
Akukho mfuneko yokumisela umhla wokupheliswa kwesivumelwano sobambiswano
Ubambiswano lweTyala elilinganiselweyo linokuba nepropathi, limangalele, kwaye limangalelwe ngenxa yenqanaba labo njengeziko elisemthethweni elahlukileyo
Izinto ezingalunganga kwi-LLP
Ubambiswano lweTyala eliNcitshisiweyo lifuna uxwebhu olusemthethweni ngakumbi kunokuthetha ubuDlelane ngokuBanzi ngenxa yobume bayo njengequmrhu elisemthethweni
Ishishini lithathwa njengelichithakeleyo xa ubuDlelwane boThintelo lweTyala eliLingeneyo luphulukana neqabane
Kwamanye amazwe ziingcali kuphela, ezinje ngamagqwetha, abakhi bezakhiwo kunye neeakhawunti abanokusebenzisa olu hlobo lwequmrhu.
Inkampani eLingene Liability Company ("LLC") inezibonelelo zokukhusela ityala kwiNkampani kunye nezibonelelo zokukhusela iiasethi zoBambiswano oluDibeneyo. Iinkampani ezinamatyala amancinci zidibanisa uxanduva olulinganiselweyo olufunyenwe kwiiNkampani kunye nenqanaba lerhafu loMnini Sole okanye ubuDlelwane, ngokokubona kobunini. Umntu unokukhetha ukuba i-LLC ihlawuliswe irhafu njengequmrhu lika-C okanye iqumrhu lakwa-S. KwiNkampani yeTyala elinoMda, abanini kubhekiswa kubo njengamalungu.
Xa i-LLC ityholwa, amalungiselelo asemthethweni asekwe kwinqanaba lawo njengeziko elisemthethweni elahlukileyo likhusela amalungu ngamanye kwityala. Xa amalungu emangalelwa ngokobuqu, imimiselo ikhusela i-LLC kunye neeasethi ezikuloo nto ekuthinjweni ngababolekisi. Ngenxa yezi zibonelelo, iNkampani yeTyala eliThintelweyo ihlala isetyenziselwa ukuba ibe notyalo mali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba kunye nokukhusela amalungu eengcali ezahlukeneyo zeeFirms ezinkulu (accounting, zomthetho, njl.
Izibonelelo zeNkampani ezinamatyala amancinci
Ikhusela iiasethi zenkampani ukuba amalungu amangalelwe
Ukhusela amalungu ukuba inkampani iyamangalelwa
Inkampani yeTyala elinoMda inokusekwa lilungu elinye okanye nangaphezulu
Amalungu e-LLC anokukhetha omnye umntu, okanye iqumrhu lokulawula inkampani
Isivumelwano sokusebenza silawula iNkampani yeTyala eliNqunyelweyo
Inkampani eLinganisiweyo yoTyala inokulonwabela ixesha elingapheliyo ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kumanqaku ombutho
Ukungancedi kweenkampani ezinamatyala amancinci
Njengeziko elisemthethweni, iNkampani yeTyala eliNqunyelweyo ifuna amaxwebhu asemthethweni ngakumbi kunokuba enokufunyanwa kwi-Sole Proprietorship okanye kwiNtsebenziswano ngokubanzi
Umbutho uthathwa njengomthetho njengeziko elisemthethweni okanye "umntu" owahlukileyo kwabo bangabanikazi okanye abalawulayo. Umbutho unokufaka iifayile njenge-C-Corporation, okanye njenge-S-Corporation. I-S-Corporation yayiyi-C-Corporation yangaphambili eyenza iifayile ze-IRS 2553 ukukhetha imeko ekhethekileyo yerhafu. I-S-Corporation iye yadlula kwirhafu, ikhawulelwe phakathi kwe-75 kunye ne-100 okanye bambalwa abaninizabelo (kuxhomekeke kwimeko eyakhiwe kuyo), kwaye ayinakuba nabanini zabelo abangabo base-US. I-C-Corporations inokuba nenani elingenamkhawulo labanini zabelo, bavunyelwe ukuba babe ngabase-US kunye / okanye abangahlali base-US abaninizabelo, kwaye bahlawuliswa irhafu kwiingeniso ezipheleleyo. Umbutho we-C unokutsala iindleko zonyango kunye neinshurensi.
Zombini iinkampani zika-C kunye no-S zinokuba nesicwangciso somhlala-phantsi. Imali ehlawulwe kwisicwangciso somhlala-phantsi iyatsalwa kwirhafu kwiqumrhu kwaye akukho rhafu kumqeshwa. Imali engaphakathi kwisicwangciso sepenshini inokukhula ngaphandle kwirhafu de ikhutshwe xa uthatha umhlalaphantsi.
Abanini zabelo (abanini) bequmrhu bakhuselwe kwityala xa ishishini limangalelwa
Ixesha eliPheleleyo leNkampani ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kwiSatifikethi sokuNgeniswa
Abanini babenoxanduva lwabo olulinganiselweyo kwimali abayihlawuleyo kwizabelo zabo zesitokhwe
Ukusebenza kwequmrhu akuchaphazeli ukuhanjiswa kwezabelo, okanye ukusweleka komnini zabelo
Imibutho inokuba ngumnini wepropathi, ibambe, kwaye ibekwe ityala ngenxa yenqanaba labo njengeziko elisemthethweni elahlukileyo
Ukugcinwa kweerekhodi okuncinci
Ubhaliso kubhaliso lukarhulumente
Nje ukuba ubandakanywe, kukho amanyathelo ambalwa aluncedo onokuwathatha anokunceda umntu axhamle izibonelelo zombutho. Umzekelo, ukufunyanwa kwe-ID yeRhafu yeFederal kwi-IRS linyathelo elibalulekileyo. Ukuba ufayila njenge-S-Corporation, ifom ye-IRS eyi-2553 kufuneka ifayilishwe ngaphambi komhla we-16th wenyanga yesithathu yonyaka werhafu oza kuqala unyulo, okanye nangaliphi na ixesha kunyaka werhafu oqhubeka kunyaka werhafu S- Umbutho uza kuqala ukusebenza. Emva kokufumana inombolo yeSazisi yeRhafu, amanqaku okufakwa, kunye nesatifikethi esifakwe ngurhulumente, kufuneka kusekwe iakhawunti yebhanki eyahlukileyo yeshishini, ngokuqonda ukuba "ukudibanisa" ubuqu kunye Iimali zeshishini akufuneki zenzeke. Unonophelo kufuneka lwenziwe ukuba nawaphi na amaxwebhu alandelayo afayilishwe kurhulumente njengoko kufuneka, njengoluhlu lwamagosa kunye nabalawuli, kwaye unobhala unikwe kwaye ajongane noXanduva lweMizuzu. Ukuba kufuneka njalo, qiniseka ukufumana iphepha-mvume lokushishina kwindawo apho inkampani isebenza khona. Ingcebiso elungileyo ukuba neengcali zerhafu ezinamava kubalo-mali lwenkampani zilungiselele iifilitha zerhafu ezifunekayo. Apha ngezantsi kukho isishwankathelo sezinto ezibalulekileyo ekufuneka uzikhumbule emva kokuba umbutho wakho uhanjisiwe:
Fumana iNombolo yeSazisi yeRhafu
Yenza igama le-S-Corporation ukuba unqwenela njalo
Ifayile eyimfuneko yokulandelela njengoluhlu lwamagosa kunye nabalawuli, ukuba kuyafuneka
Nxibelelana nengcali yeRhafu ubuncinci ngonyaka